Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » CDC: Ọgwụ mgbochi ọ bụla nke WHO kwadoro dị mma maka ntinye US
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
A nabatara ọgwụ mgbochi nke Pfizer-BioNTech, Moderna na Johnson & Johnson kwadoro ugbu a na US-nke abụọ a na-eji naanị ihe mberede-ebe WHO kwadoro jabs sitere na AstraZeneca/Oxford, Sinopharm na Sinovac na mgbakwunye na atọ atọ akpọrọ aha. .
Ọgwụ mgbochi isii nke FDA nyere ikike/kwadoro ma ọ bụ edepụtara maka WHO iji ihe mberede mee ihe ga -emezu ụkpụrụ maka njem na US.
Nkwupụta CDC na-abịa izu ole na ole White House kwuru na ọ ga-ebuli mmachi njem ụgbọ elu site na mba 33.
CDC gosikwara na ọ gwala ndị na-anya ụgbọ elu dị iche iche nke ndepụta akwadoro nke jab-19 jabs.
Onye na-ekwuchitere Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) kwuru na a ga-anabata ọgwụ mgbochi COVID-19 ọ bụla nke World Health Organisation (WHO) kwadoro maka ndị ọbịa si mba ọzọ na-eme njem na United States.
"Ọgwụ mgbochi isii nke FDA nyere ikike/kwadoro ma ọ bụ edepụtara maka WHO iji ihe mberede mee ihe ga -emezu ụkpụrụ maka ịga US," a CDC onye nkwuchite kwuru, dị ka akụkọ si kwuo.
Ọgwụ mgbochi ọrịa mepụtara Pfizer-BioNTech, Oge a na Johnson & Johnson ka akwadoro ugbu a na US-nke abụọ n'ime ihe eji eme ihe mberede naanị-ebe WHO kwadoro jabs sitere na AstraZeneca/Oxford, Sinopharm na Sinovac na mgbakwunye na mmadụ atọ akpọrọ aha.
Nkwupụta CDC na-abịa izu ole na ole White House kwuru na ọ ga-ebuli mmachi njem ụgbọ elu site na mba 33, nke enyere iwu na mbụ ịkwụsị mgbasa COVID-19, oge ụfọdụ na Nọvemba. Agbanyeghị, n'oge ahụ, o kwughị kpọmkwem ọgwụ mgbochi ga -eru.
Mgbe e mechara na Fraịde, CDC gosikwara na ọ gwala ndị ụgbọ elu dị iche iche nke ndepụta jabs akwadoro, na -agbakwụnye na ụlọ ọrụ ahụike 'ga -ewepụta ntuzi aka na ozi ka emechara ihe ndị njem chọrọ.'
Otu na -anọchite anya ọtụtụ ndị na -ebu ụgbọ elu, Airlines maka America, kwadoro nkwupụta ahụ, na -ekwu na "ọ masịrị mkpebi CDC ịnabata ndepụta ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị njem na -abanye US."
Life ekwu, sị:
October 9, 2021 na 19: 26
Naanị Comirnaty ka FDA kwadoro. Pfizer-BioNTech bụ EUA dịkwa ka Moderna na J&J. Edere ya nke ọma na akwụkwọ FDA (Akwụkwọ nkwado, FAQ maka Comirnaty (COVID-19 Vaccine mRNA) na Akwụkwọ ikike (Reissued). Agara m ụlọ ahịa ọgwụ abụọ na o doro anya na ha anụtụbeghị banyere Comirnaty.